Mareykanka oo maalintii labaad duqeyn ku haya dagaalyahanada ISIS ee Ciraaq – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo maalintii labaad duqeyn ku haya dagaalyahanada ISIS ee Ciraaq
A warsame 9 August 2014 9 August 2014
Mareeg.com: Mareykanka ayaa maalnitii labaad weerar cirka ah ku qaaday fariisimo ay dalka Ciraaq ISIS ku leedahay dalka Ciraaq.
Laba weerar oo dheeraad ah ayaa diyaaradaha Mareykanku ku qaadeen kooxda Islaamiga ah ee ku xoog badan waqooyiga dalka Ciraaq. Waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sidaasi sheegtay.
Diyaaradaha duuliya la’aanta ah ee mareykanka iyo kuwa ciidamada badda ayaa weerar cayiman ku qaaday meel ku dhow magaalada Irbil ee magaalo madaxdfa u ah maamulka goboleedka Kurdiyiinta oo ah meesha uu ka dhacay weerarkii ugu horeeyay ee Mareykanka uu qaaday subixii Jimcaha.
Kooxda sunniyiinta ah ee Daacish ayaa ku xooggan qeybo kamid ah dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Daacish oo sidoo kalena loo yaqaano ISIS, ayaa qabsatay qeybo muhiim u ah Ciraaq, sida biya xireenka dalka Ciraaq.
Tobannaan kun oo qof oo ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ayaa guryahooda ka qaxay kaddib markii ay weeraro kala kulmeen.
Weeraradan cirka ah ayaa noqonayo kuwii ugu horeeyay ee Mareykanka si toos ah uu ugu qaado Ciraaq, taas oo qeyb ka ah howlgalada militariga uu Mareykanka ka waday tani iyo 2011-kii markii ciidamadiisa ay ka bexeen dalkaasi.
Weeraradii labaad, diyaaradaha duuliye la’aanta ah ee Mareykanka waxa ay burburiyeen xarun waxaana ku dhintay koox kamid ah dagaal yahaniinta, sida ay waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagon ay sheegtay.
Weerarada aya geysanayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha dalkaas Barack Obama uu amaray iney cirka laga weeraro dowladda Islaamiga ah ee sidoo kale loo yaqaano ISIS.
Alshabaab oo xalay weerar ku qaaday Buulo Barde
Dhuxulow & waxqabadka Xukuumadda Soomaaliya ee todobaadkii tegay